WWE News: Nanomboka fiofanana amin'ny tolona i Brian Pillman Jr. - Wwe
WWE News: Nanomboka fiofanana amin'ny tolona i Brian Pillman Jr.
Ny zanakalahin'i Brian Pillman, Brain Pillman Jr. aka Brian Zachary, dia voalaza fa nanomboka niofana ho an'ny laharam-pahamehana amin'ny tolona matihanina izay hatao amin'ny faran'ity taona ity. Nentina tany amin'ny media sosialy ilay tanora manantena ny tolona tanora mba hampandre ny mpankafy izany.
Brian Pillman dia fantatry ny androny tamin'ny WCW sy WWE (WWF tamin'izany fotoana izany) ary nilalao ho an'ny WWE mandra-pahafatiny tamin'ny Oktobra 1997.
ny fizotry ny fitiavana
Nodimandry izy tamin'ny faha-35 taonany noho ny aretim-po tsy voamarina teo aloha ary navelany ny zanany 6, anisan'izany ny zana-badiny roa niaraka tamin'i Marlena King vadiny.
Vao 3 taona i Brian Jr tamin'ny fotoana nahalasanan-drainy ary nifandray tamin'i Lance Storm vao tsy ela akory izay nanantena fa hanana fotoana hampiofanana miaraka amin'ity farany ao amin'ny Storm Wrestling Academy any Canada. Toa voatery i Storm ary i Pillman Jr no hanao ny laharam-pahamehana amin'ny 20fahatsingerintaona nahaterahan'ny rainy, amin'ity volana oktobra ity.
Tsy vahiny amin'ny efitrano fiofanana ilay tovolahy, satria hitany ny nandefa fanavaozana tsy tapaka ny fampihetseham-batana nataony:
Alakamisy mangetaheta miaraka amin'ny @hoosiergator !! #thirstythursday #thirstyforgains #overheadsquat
Lahatsoratra iray nozarain'i Brian Pillman (@ flyinbrian41) tamin'ny 18 Mey 2017 tamin'ny 7:37 maraina PDT
iza no sipan'i stock hannah
Vao tsy ela akory izay i Pillman dia naka ny boriboriny voalohany tao amin'ilay fifanomezam-boninahitra avy amin'ilay mpiofana ho mpiady tolona mpiady efa ela, Rip Rogers tao amin'ny Ohio Valley Wrestling ary nankany Instagram hanambara ny mitovy. Ity ambany ity ny sarin'ny fiofanana momba ny tolona matihanina voalohany-
Nilaza izy ireo fa ny andro 2 manan-danja indrindra amin'ny fiainan'ny olona dia ny andro nahaterahany sy ny andro hahitan'izy ireo ny antony ...... Androany aho niditra an-tsokosoko, naka banga, ary nihazakazaka ny tady voalohany. eo ambany fanaraha-mason'ny OG Hustler tenany, Rip Rogers !! Te-hisaotra an'i @ohiovalleywrestling aho tamin'ny fotoana nahamandoana ny tongotro alohan'ny hiaingako amin'ny volana septambra !! #ovw #ilovewrestling #hungryformore
Lahatsoratra zarain'i Brian Pillman (@ flyinbrian41) tamin'ny 20 Mey 2017 tamin'ny 12:37 alina PDT
Ilay tovolahy dia voalaza fa hanaraka ny dian-tongotr-drainy ary tahaka ny efa nampanantenainy tamin'ny fiandohan'ity taona ity, dia mety hanana fomba manidina be hanohizana ny lova navelan'ny dadany farany tandindomin-doza tamin'ny tolona.
Brian Pillman Jr. dia voalaza fa hiala any Canada amin'ny volana septambra ary hanao ny laharam-pahamehana amin'ny ady amin'ny volana oktobra.
Mahafinaritra ny mahita an'i Brian Pillman Jr. misolo tena ny fianakaviany amin'ny avonavona. Vao nanomboka ny tovolahy, izay azo inoana fa ho làlana lava sy henjana amin'ny raharaham-barotra mitolona amin'ny tolona matihanina.
Ho an'ireo tsy mahalala, tsy io no havan'i Pillman voalohany izay nitady asa tamin'ny fanatanjahantena, satria i Alexis Reed aka 'Sexy' Lexi Pillman, zanakavavin'ny kintana WCW, dia nanandrana ny tànany tamin'ny fanatanjahantena saingy indrisy fa nodimandry tamin'ny 2009 izy noho ny lozam-pifamoivoizana. Amin'ny maha-mpankafy ny Loose Canon tany am-boalohany an'ny WWE, tiako ny mahita ny zanany lahy tonga any WWE ao anatin'ny 3-4 taona ho avy.
mahatsiaro tena ho tsy an'ny teny ianao
ahoana no ahazoana fitokisana aorian'ny lainga
inona no hatao amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany
mitanisa momba ny tsy fahatsapana ny tenanao